घरपरिवारका सबैलाई कोरोना लाग्यो, कोरोनाले बुबा आमा र ग’र्भ’व’ती छोरीको पनि गयो ज्या’न ! – AB Sansar
December 2, 2020 Ab-संसारLeaveaComment on घरपरिवारका सबैलाई कोरोना लाग्यो, कोरोनाले बुबा आमा र ग’र्भ’व’ती छोरीको पनि गयो ज्या’न !
काठमाडौं। कोरोना म:हा’मारीले यतिबेला विश्व नै प्रभावित बनिरहेको छ । मानिसहरुले खुलेर आफ्नो काम निर्धक्क तरिकाले गर्न पाएका छैनन् । कोरोना म हा मारीको समयमा सबैभन्दा बढी असर बृद्ध र ग’र्भ’व’ती महिलाहरुलाई परेको छ । कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि ग:र्भ’व’ती भएका महिलाहरुले यो ९ महिना बडा क:ष्ट’कर तरिकाले बिताइरहेका छन् ।
यसैबिच रुसकी सेन्ट पिटसबर्ग शहरकी स्वेतलाना सोरोचिन्सकाया नाम गरेकी ग:र्भ:वतीको पनि भे’न्टि:लेटरमा उपचार चलिरहेको समयमा उनले अन्तिम श्वा’स लिएको डेलिमेलले उल्लेख गरेको छ । डेलिमेलका अनुसार ति महिलाका बुबा र आमाको पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ । मुटुको बि’रा:मी रहेका बुबालाई अस्पतालमा कुर्दा बुृबालाई भएको सं:क्र’मणपछि उनमा पनि कोरोना पोजेटिभ देखिएको बताइएको छ ।
डे:लि’भरी डेट नजिकिएसँगै उनलाई प्र:सू’ती अस्पतालमा जाँदा कोरोना सं:क्र’मण पुष्टि भए लगत्तै रुसको ठूलो सं:क्रा’मक रोगको अस्पताल भर्ना गरेर उपचार सुरु गरिएको गरियो । तर बि:ड’म्ब:ना उनलाई बचाउन सकिएन । तर उनलाई ३ दिनसम्म अस्पतालमा भर्ना गरेपछि स्वे:त:लानाले तय मितिभन्दा ६ हप्ता पहिले छोरालाई जन्म दिइन् ।
कक्षा १२ को परीक्षा चलिरहेको अबस्थामा यि बिद्यार्थीले लेख्न छाडेर बनाए टिकटक !
अ’रि’ङगाले टो:के’र ग’म्भी:र घा’ई’ते भएका ४८ बर्षीय गोकर्ण रावल को उपचारको क्रममा काठमाण्डौमा मृ:त्यु !
यो वर्षका संसारकै राम्रा-नराम्रा पासपोर्टको सूची सार्वजनिक, नेपाल पर्‍यो खराबमा!